Huawei Mate X ga-eji ihe nhazi ohuru na ese foto Gam akporosis
Fewbọchị ole na ole gara aga ọ kwadoro na na Huawei Nwunye X na-egbu oge ya igba egbe ọzọ, oge a ruo na njedebe nke afọ, ikekwe n’ọnwa Nọvemba. Ọ bụ oge nke abụọ akara ndị China na-egbu oge ịmalite ekwentị ya. N'oge gara aga ekwuru na a ga-eme mgbanwe na ekwentị, ihe dị ka eziokwu, na-enwe mgbanwe karịa ka a tụrụ anya ya.
Ezie na ekpughere ụfọdụ mgbanweọ dị ka nke ahụ Huawei Mate X ga-ahapụ anyị na akụkọ karịa ka a tụrụ anya ya. Ekwentị ga-eji ihe nhazi dị iche, na mgbakwunye, anyị na-ahụkwa mgbanwe na igwefoto ya. Yabụ na ọ ga - abụ ihe atụ dị iche na nke anyị hụrụ na ọnwa Febụwarị.
Nke mbụ n’ime mgbanwe ndị ahụ na-ezo aka na ihe nhazi nke ekwentị a ga-eji. Huawei Mate X ga-eji Kirin 990, nke bu ihe nhazi ahuru anya ibute ya na di na nwunye 30 a daa. Ya mere, anyị nwere ike ịtụ anya inwekwu ike n'echiche a, ọ ga-abịa na GPU nke ga-ekwe ka ịdekọ vidiyo na 4K na 60 fps.
N'aka nke ọzọ, ekwentị ga-ahapụ anyị ka ọ gbanwee na igwefoto ya. Ihe a bụ ihe asịrị kemgbe izu, mana ọ dị ka ọ bụ eziokwu. Ọzọ ihe mmetụta ga-etinyere, ya mere ekwentị ga-enwe kamera anọ na ngụkọta. Ọzọkwa, a ga-enwe mmelite nke igwefoto ndị a gụnyere.
Ebe ọ bụ na ekwuru na igwefoto nke Huawei Mate X ga-abụ yiri ihe anyị hụrụ n'afọ a na P30 Pro. Ozi dị egwu, n'ihi na P30 Pro hapụrụ anyị ụfọdụ igwefoto kachasị mma n'ahịa, nke doro anya na ọ bụ ezigbo nzọ na akara nke ndị China.
Mgbanwe ndị na-enyere aka gbanwee Huawei Mate X a n'ụzọ dị ịrịba ama, dị ka anyị pụrụ ịhụ. Ọ bụ ezie na anyị ga-echere ọnwa ole na ole iji hụ ha, ebe ọ bụ na ekwentị a agaghị abata rue November, ọbụlagodi nke a. Ebe ọ bụ na maka ugbu a, enweghị ụbọchị ntọhapụ. Anyị ga-ege ntị na akụkọ ọhụrụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » Huawei Mate X ga-enwe ihe nhazi ọhụụ na kamera ọhụrụ
Nweta OUKITEL C17 Pro na ọnụahịa kachasị mma maka obere oge